Suède manolotra tanjona kendrena hampihenana ny famoahana entona entona entona fiaramanidina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Suède manolotra tanjona kendrena hampihenana ny famoahana entona entona entona fiaramanidina
Sweden dia manana tanjona kendrena fatratra ny tsy fananana fôsily amin'ny 2045. Tao anatin'ny fandraisana andraikitra, dia nambara androany, ny 4 martsa, ny tolo-kevitra iray momba ny fiaramanidina tsy hanadino. Ny tolo-kevitra dia milaza fa hampiditra mandat ny fihenan'ny entona entona entona miompana amin'ny solika fiaramanidina amidy any Suède i Suède. Ny haavon'ny fihenam-bidy dia 0.8% amin'ny 2021, ary hitombo tsimoramora ho 27% amin'ny 2030. Ny haavon'ny fihenam-bidy dia tombanana ho 1% (11 000 taonina) solika maharitra maharitra amin'ny 2021, 5% (56 000 taonina) amin'ny 2025 ary 30% (340 000 taonina) tamin'ny 2030. Izany no mahatonga an'i Suède ho mpitarika tsy azo iadian-kevitra amin'ny famoahana ny seranam-piaramanidina.
“Mila mpialoha lalana sy firenena be herim-po isika hitarika antsika amin'ny fitomboan'ny sidina maharitra. Te hiarahaba an'i Suède aho - nametraka ny bara faran'izay avo amin'ny fihenan'ny famoahana entina fiaramanidina amin'ny alàlan'ny fampiasana solika jet azo havaozina. Ity fanambaràna ity dia mametraka tanjona mazava sy feno fahasahiana, ary mampiseho ny làlana tokony hizoran'ny fiaramanidina hahatratrarana ny tanjona hampihenana ny famoahana azy. Ary koa, mamorona ny faminaniana ilaina amin'ny fangatahana an'i Neste sy ireo mpamokatra solika jet hafa azo havaozina hampiasa vola amin'ny fampitomboana ny vokatra ", hoy ny talen'ny CEO an'ny Neste, Peter Vanacker.
Norvezy dia nanambara ny baikon'ny fampifangaroana biofuel 0.5% amin'ny taona 2020. Hisy fahaiza-manao ampy eny an-tsena hamatsy ireo volan'ny solika azo avaozina ho any Suède sy Norvezy. Neste dia namokatra volavolan-tsolika voalohany an'ny Neste MY Renewable Jet Fuel vita amin'ny fako sy ny sisa tavela, ary hisy volavolan-dalàna miakatra amin'ny taona manaraka. Nanambara i Neste fa hanangana vokatra azo havaozina fanampiny, izay ahafahan'ny famokarana solika jet azo havaozina hatrany amin'ny 1 tapitrisa taonina isan-taona amin'ny 2022.
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina manerantany dia nametraka tanjona kendrena hanalefaka ny entona entona entona avy amin'ny fitaterana an'habakabaka, anisan'izany ny fitomboan'ny karbaona-tsy miandany amin'ny taona 2020 sy ny ho avy, ary ny fihenan'ny 50 isan-jato ny famoahana entona fiaramanidina an'habakabaka hatramin'ny 2050. Ny fiaramanidina dia mila vahaolana marobe amin'ny fihenan'ny entona entona entona. Amin'izao fotoana izao, ny lasantsy fiaramanidina maharitra dia manome ny hany vahaolana mahomby amin'ny solika ranoka fôsily amin'ny famoahana fiaramanidina.
Manitatra làlana ny Wizz Air
WestJet dia mandefa sidina voalohany eo anelanelan'ny hub Calgary sy Atlanta